प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वीस बैंकमा रकम रहेकै हो त ? « Kalakhabar
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वीस बैंकमा रकम रहेकै हो त ?
प्रकाशित मिति : बुधबार, ३१ असार २०७७ १४:२९
कलाखबर संवाददाता,३१,असार –काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीको स्वीस बंैकमा रकम रहेको समाचार बाहिर आएको छ । तर उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने त्यो निराधार र आधारहीन भएको बताएका छन् । उनले ‘ग्लोबल वाच एनाइसिस’को ह’वाला दिँदै प्रकाशित समाचार जनतामा भ्रम छर्न र प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्न उद्यत संचारमाध्यमहरूको रवैया भएको टिप्पणी गरेका छन्।
ग्लोबल वाच एनालाइसिसको हवाला दिदैं केही नेपाली अनलाइनहरूले गैरजिम्मेवारीपूर्ण र बदनियतका साथ गरिररहेको अत्यन्त गलत र चरित्रहत्या गर्न लक्षित झूठो सम्रेषण गरेको आरोप लगाएका छन् । स्वीस बैंकमा खाता र ५।५ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा रहेको भन्ने कुरा कपोलकल्पित र शतप्रतिशत नै गलत भएको थापाले बताएका छन् ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले लेखेका छन्, ‘जुनसुकै दुर्नियतका साथ तयार गरी सम्प्रेषित यस्ता तथ्यहीन सामग्रीहरूलाई आधार मानेर समाचार बनाई नेपाली जनतामा भ्रम छर्न र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बदनाम गर्न उद्यत यस्ता कतिपय संचारमाध्यमहरूको रवैया खेदजनक छ। ’ग्लोबल वाच एनालाइसिसले एक सामग्री प्रकाशित गर्दै ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ती विगत केही वर्षहरूमा धेरै गुणा बढेको उल्लेख गर्दै उनको स्वीस बैंकमा पैसा रहेको दाबी गरेको थियो।
सोही सामग्रीलाई आधार मानेर समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले खण्डन गरेका हुन्। उनले सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहेको बेला बदनाम सुनियोजित षडयन्त्र गर्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्।